Ololaha loogu talagalay Muslimiinta Uighurs ee Shiinaha / Xuquuqda Aadanaha
27 2016 karaa
Post Sticky By Oliver Bienkowski Posted in ololayaal Permalink
27. May 2016 Oliver Bienkowski
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 27. May 2016
PixelHELPER waxay taageerta madaxbanaanida Uighurs, Hong Kong, Taiwan & Tibet
Xusuusta Uighur ee Marrakech
Am 29.07.2019 waxaan ku daabacnaa muuqaalkii 1aad ee xusuus-qorka Uighur ee #Marrakech, waxaan u qorey dhammaan joornaalada carabta waxaan sameynay wax jawaab ah kama helin, kaliya ka dib markii aan u sheegnay wargeysyada in safka ugu horreeya ee taallada ay leeyihiin Yuhuudda gay taallada "Xusuustii Holocaust ee Marrakech" ee taariikhda Moroccan. Nacaybka wuxuu ka soo horjeeday midnimada Muslimiinta Uighurs. Ilaa iyo hada, ma jiro wadan muslim ah oo dunida ka jira oo taageera Uighurs illaa iyo inta aad ugu baahatid. Waxaan rajeyneynaa in 100 sano lagu xasuusto xuska u horeeya ee dadka muslimiinta ah ee reer turki ee Uighurs waxay noqon doontaa meel badal u noqota midowga wadamada muslimiinta iyo Uighurs.
Anaga oo wada jirna waxaan rabnaa inaan dib u dhisno dhisme kasta oo Shiinaha ku burburiyey dalal kale oo aan uga tagno waddanka ay ka go'antahay iyada oo ujeeddada laga leeyahayna aan u oggolaanaynin Shiinaha inuu baabi'iyo dhaqanka Uighur.
Haddii Shiinuhu burburiyo 1000 kaniisadood, caro ka dhacda Yurub way fiicnaan lahayd. Dab ka dhaca magaalada cathedra wuxuu dab ku shidi karaa midnimada adduunka oo dhan halkan. 1000 Masaajid & Kaniisado Masiixiyiin ayaa horay loogu burburiyey Shiinaha. Waxaan u soo bandhignay dhammaan Uyghurs inay dib u dhisaan iyaga oo ay yihiin nuqulo sax ah oo dibedda ah si loo abuuro midnimo dadka Muslimiinta ah ee la dulmay ee adduunka oo dhan. Nasiib darrose, Uyghurs intooda badani waxay ku nool yihiin orod ama xeryo dib-u-waxbarasho Shiinaha ah waana kuwo sabool ah Taasi waa sababta aan u aasaasay lacag aruurinta GoFundme. Waxay kuxirantahay inta aan aruurineyno, waxaan dhisaa maktabad, masaajid ama qabri.
Shiinaha ayaa burburiyey in kabadan 3 masjid, qabriyo iyo goobo dowladeed 1000 sano gudahood. Magaalada Beijing si nidaamsan ayaa u burburinaysa dhaqanka iyo diinta dadka muslimiinta ah ee Uighurs. Sawirada satalaytka ayaa muujinaya sawir cabsi leh. PixelHELPER waxay tusaale u noqon doontaa oo dib u dhisi doontaa qabrigii Iman Asim ee burburay ee buuraha Moroccan iyada oo lagu xusayo taallo lagu xusuusinayo burburka Shiinaha. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan mashruuca
Waxaan ka dalbanaynaa dimuqraadiyadda Shiinaha. Iyo wadamo u gaar ah Uyghur, Hong Kong, Taiwan & Tibet. Xisbiga Shuuciga waa in si dhakhso ah loo kala diraa. Qoolleyda saadaasha iftiinka
Waxaan dalbaneynaa xorriyadda diinta ee Shiinaha, ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyo doorashooyin dimuqraadi ah mustaqbal wanaagsan. Dhammaan masaajidada waa in dib loo dhiso kharashka Shiinaha, oo dhan #Uiguren Waa inaad xor u noqotaa inaad ku dhaqanto rumaysadkiinna.
Markasta oo Yurub ah oo gariiraya, Xaglo-toosiye ayaa u dulqaaday jirdil. Dalka Shiinaha, Islaamku waa mamnuuc yahay, riyo ah oo qunyar-socod ah. Masaajidada 200 waa la burburiyey, Shiinuhu waxay doonayaan inay ogaadaan garnix. Nidaamku wuxuu xidhaa Uighurs, oo wuxuu ku qoslay daboolka. Qof kasta oo Alle rumaysta ee Shiinaha, wuxuu carruurta ku soo dejiyaa hurdada.
Kadibna dhammaan muslimiinta way wada baxeen, ayuu yidhi Xi Jinping taas oo ahayd mid aad u wanaagsan. Sababtoo ah waad daawatay gobolada oo dhan, laakiin lacagta Shiinaha ayaa laga yaabaa inaad haysato. Laakiin markaa waxaad umuuqataa xitaa meel fog, dhanka kale, Uigure wuxuu ku jiraa wasakh. Quraanku waa tigidhada tigidhada xilliga xaruunta ururinta.
Dhaqday maskaxda Uyghurs, Maxamed ma ogolin taas. Kor u fuula darbiga Shiinaha oo jiifso, adoo sugaya. Wuxuu u dirayaa raaciyadiisa Hong Kong, Tibet iyo wixii ka dambeeya. Dhamaan muslimiinta oo dhami way iskugu imaan lahaayeen gadaashiisa Xi Jinping ayaa soo ridi lahaa mid. Shiinaha waxaa markaa ka jira dimuqraadiyad isla markaana mar labaad Islaamiyiinta.
Iyadoo loo marayo xeryaha dib-u-dhiska iyo kormeerka dhow, dawladda dhexe ee China ayaa isku dayaysa in ay ka hortagto dagaalada gobolka. Jiritaanka xarumahan oo si rasmi ah u xaqiijiyay xukuumadda bishii Oktoobar 2018, laakiin isla markaasna waxay beeniyeen eedaymahaas jirdil ah.
Uighurs, oo ah Muslim-ka Turkvolki ee ku yaal gobolka Shiinaha ee Xinjiang, wax badan ayaa is beddelay sannadihii la soo dhaafay (sawir laga soo qaaday 22.09.2013, burburka masjid dumiyay ee Kashgar). Laakiin xitaa hoggaanka siyaasadeed ee magaalada Beijing waxay ahayd inay ogaadaan in gobolka ugu weyn ee Galbeedka Jamhuuriyadda Dadka uusan qabsan karin.
Siyaasadda Shiinaha ee Xinjiang waxay lamid tahay ta Buddhist Tibet: qowmiyada Shiineeska iyo shirkadooda waa la bartilmaameedsadaa. Sidoo kale waa kuwa iyagu inta badan ka faa'iida barnaamijyada kaabayaasha dowladda iyo maalgashiga. Iskuulada, luuqada maxaliga ah waxaa si badan ushaqeeya Mandarin. Markaa Uighursku waxay u cararayaan diinta si ay u ilaashadaan aqoonsigooda. Markii dowladda ay sii kordhiso diinta Islaamka, ayay sii badataa xagjirnimada.
Waxaan dalbaneynaa in si deg deg ah loo sii daayo dhammaan Uighurs & Hordhac
xorriyadda diinta ee Shiinaha. Qof kasta ayaa rumaysan kara waxa uu doonayo, Flying Spaghetti Monster ama mid ka mid ah diimaha aduunka. Shiinaha waa in ay joojiyaan dadka deggan xagjirnimada diinta. Dastuurka jarmalka waa xoriyadda diinta - waa in ay noqotaa tusaale ahaan Dastuurka Shiinaha.
Ololaha loogu talagalay Muslimiinta Uighurs ee Shiinaha / Xuquuqda Aadanaha May 6th, 2020Oliver Bienkowski
Tagged: Shiinaha, Uighurs, Uyghur
Isu duwo Wargeys
ka dhigista Android App Bahrain 13 Chancellery Federaalka Sirdoonka dowladda dhexe Adeeg sirdoon midabo leh baadiyaha dab Shiinaha maalgalinta dadka dabka jirdil freeRaif ra'yiga lacag la'aanta ah hercules gargaarka baniaadanimo ololaha ololayaal Catalonia isbitaalka miinooyinka Jacaylku ogyahay xuduud la'aan Livestream durdurrada Live Caawinaad aad loola tacaalo Loreley Morocco anigaa iska leh NSA ee guriga Oberwesel maxaabiista siyaasadeed Rainbow for Orlando hubkiisa Sacuudi Carabiya raxan Help guga Isbaanish Spirulina Uighurs Uyghur ilaalinta madax-bannaanida United Stasi America upcycling ganacsiga hubka Haa waan ku baari karnaa! socodka
Wanaajin / Tixraac